मेस्सी र रोनाल्डोको राज तोड्दै लुक मड्रिकले बलोन डिओर जित्दै ! – Medianp
मेस्सी र रोनाल्डोको राज तोड्दै लुक मड्रिकले बलोन डिओर जित्दै !
मिडिया एनपी एनपीप्रकाशित मिति: शुक्रबार, असार २९, २०७५१०:३९0
काठमाडौँ,२९ असार । मेस्सी र रोनाल्डोको राज तोड्दै लुक मड्रिकले यो वर्षको बलोन डिओर जित्ने सम्भावना रहेको छ । मड्रिकको टोली विश्वकप २०१८ को फाइनलमा पुगेको पुगेको छ भने यो इतिहासकै पहिलो पटक हो ।
मड्रिकले बालोन डिआर जित्न अब उनको टोलीले विश्वकप नजिते पनि पुग्ने विश्लेषण अन्तर्राट्रिय सञ्चार माध्यमहरुले गरि रहेका छन् । २००६ मा ब्राजिलियन स्टार काकाले बालोन डिओर जिते यता रोनाल्डो र मेस्सीले मात्र उक्त उपाधी जित्दै आएका छन् ।
यो वर्ष बालोन डिओर पाउनेको नाम न मेस्सी हुनेछ न त रोनाल्डो नै, विजेता हुनेछन् क्रोएसियाका कप्तान लुका मड्रिक । मेस्सीले गत सिजनको लिगामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेयता उनको पर्फमेन्स अपेक्षाकृत नदेखिएकोे कारण उनको मेस्सी यो वर्षको बालोन डिओरको रेसमा पुग्न अब्बल नरहेको अन्तराष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् ।
त्यस्तै रोनाल्डोले रियल मड्रिड छाडेकाले उनलाई मिडियाले समेत साथ दिने छैनन् । यो पनि मड्रिकले बालोन डिओर आउने अर्को आधार हो । मड्रिकले तीन पटक लगातार च्याम्पियन्स लिग जितको र २०१८ को विश्वकपमा क्रोएसियालाई फइनलमा पु¥याउन महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको भन्दै बालोन डिओर पाउनेमा उनी नै दाबेदार भएको विश्लेषण छ । स्पे
मायाले भरिएर आयो ‘कायरा’ गीत (भिडियो)
आँशुको आहालमा डुब्यो इंग्ल्यान्ड